Akakurumbira 3 E Mabhasikoro Ari Kutengeswa - Sangana Nekuda Kwako | ebike Shuangye
musha Blog nhau Akakurumbira 3 E Mabhasikoro Ari Kutengeswa - Sangana Nekuda Kwako
Zuva ： 2020-07-22 Zvikamu:nhau Views: 2,255 maonero
Kuva neicho bhasikoro kunogona kuita kuti iwe utasire kwenguva yakareba, nekukurumidza uye nekuenderera mberi. Kutasva bhasikoro remagetsi ndiyo mukana wakakwana wekukwirisa zuva uye kunakidzwa nemitambo yekuzorora muzhizha rino. Munguva pfupi, zviitiko zvekunze senge masiketi emagetsi, vakuru e scooters uye magetsi emagetsi emabhasiketi, ave achiwedzera mukurumbira pakati pemapoka ese emagariro. Uye ichi chikonzero e bhasiketi yekutengesa kudenga? Nekuti ikozvino, yega ye-e-bhasiketi inotarisa yepamusoro yemazuva ano uye kurongedza zvakakwana simba rekutora iwe kusvika 40 kusvika 60km pane imwechete mhosva.
Saka, ndedzipi e e mabhasikoro ari kutengeswa akakodzera kune vatengi vako pavanofunga kutenga bhasikoro remagetsi? Uyu mubvunzo wekutanga. Mhinduro inokanganisa sarudzo ye e bhasikoro. Unosarudza sei mhando dzee bhasikoro kumusika wako mukuru? Kune zvakawanda zvekusarudza kubva kune yakasarudzika guta ebike, gomo ebike kana kunyange kupeta ebike. Uye ichi chinyorwa chinokurudzira mashanu anozivikanwa e mabhasikoro ari kutengeswa.
1. Yakavanzika bhatiri gomo e bike
Nebhasikoro remakomo rekare kuvaka uye kuwedzera rakavanzika bhatiri dhizaini- hapana munhu angatoona kuti imagetsi. Yayo yese inotaridzika kunge ine simba, inovaka uye ine mutambo. Iyi ndeimwe yemabhasikoro ari kutengeswa ayo anozokutora kubva kumba kana hofisi kuenda kunze kwemitambo. Kune zvakawanda zvekuvhunduka kunwiwa nekumiswa kwealuminium alloy pamberi forogo, uye 26-inch vhiri, kunyangwe 27.5 ″ uye 29 ″ mavhiri anobatsira iyo bhasikoro munzira dzakasiyana dzakapatsanuka nyore.
Iyi 36V 10AHlithium bhatiri inobviswa, zviri nyore zvakare ndeimwe yebheteri merit. Zviri nyore kutora nekiyi, uye kuendesa kune imwe nzvimbo kunochaja pasina kufambisa e bhasikoro. Nepo iyo giya sisitimu iri yeimwe yepamusoro mubhizinesi, standard spec ndeye 21 magiya. Saizvozvowo, mabhureki ekumashure-kumashure disc anoshanda zvakanaka, achikusvitsa panzvimbo yakachengeteka kunyangwe kubva pakumhanya. Iyo yekumhanyisa kumhanya ndeye 25km / h kusvika 35km / h zvinoenderana nesimba rakasiyana kubva pa250w kusvika 500w mota. Uye kana mutengi wako achida kuteedzera kukwira kwavo, iyi bhasikoro yekutengesa inopawo iyo LCD skrini ine chaiyo-nguva stats dhata.
2. 26-inch guta yemagetsi bhasikoro
Wese munhu ane toni yekunakidzwa mumigwagwa yeguta neguta e-bhasikoro. Chekutanga pane zvese, iyi yepamusoro-ye-iyo-renji e bhasikoro riri kutengeswa. Yakavakirwa kuti itsungirire kureba uye kwakasiyana maguta kuenda pamwe nenzvimbo yezvikomo. Nenhanho yechinyakare-kuburikidza dhizaini, inotaridzika zvakanaka mune chero mamiriro. Iyo aluminium alloy furemu haingoreruke chete asi inogara yakasimba, kunyangwe kana bhasikoro remagetsi rasara panze. Iri guta e bhasikoro riri kutengeswa rinouya nehunhu hwemakanika disc bhureki uye 21 magiya ekukwira nyore. Yakasanganiswa, izvi zvinokupa kukurumidza kumhanyisa, kutungamira kwakarurama, uye kumira kwakachengeteka.
Zvakare kushandisa yakavanzika bhatiri dhizaini ne 36v 10ah bhatiri inobvisa, bhatiri rinosimuka zvakakwana mumaawa ma4-6, iro rakafanana kune ese e-bhasiketi uye anoita kuti bhasikoro rifambe famba makiromita makumi mana kusvika makumi matanhatu nematanhatu pachibharo chimwe chete. Inouya yakashongedzwa ne40W yakakwira mhanyisa brushless mota, iyo inokutendera kuti ufambe kusvika 60km / h max kumhanya, isina jarring gear-shanduko.
3. 26 ”mafuta aneta bike yemagetsi bhasikoro
Kutsvaga yakasimba, inorema-basa gomo yemagetsi bhasikoro? Sei usingasarudze iyi. Dexterous uye yakavakwa-zvakanaka, iyi e bhasikoro riri kutengeswa rine maitiro uye maitiro uye harityi kuvaratidza. Iwo 26 * 4.0 inch mavhiri anopa tani yekubata iyo inokuchengetedza iwe panzira kubva pakatsetseka kongiri kusvika kumigwagwa yevhu. Iyo aluminium alloy furu inogadzira iyi e bhasikoro rakareruka rakareruka uye rakaoma-kupfeka, zvese panguva imwe chete. Icho chigunwe chinobvarura uye makumi maviri nemaviri magiya ayo achakubatsira iwe kusvika kune yekumhanyisa mhanyisa kusvika 21-30km / h. Simba rakakwira uye hukuru hukuru aya mafuta emota bhasikoro emagetsi imwe yekusimbisa, inouya ne40w kusvika 350w isina brushless mota uye 750v kusvika 36v inobviswa lithiamu bhatiri.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve yakakurumbira e bikes yekutengesa, iwe unokwanisa kutarisa zvinyorwa zvekare kana kushanyira edu Official Website, zvakare inogona kusiira meseji pazasi.
Tags:e bhasikoro iri kutengeswa akakurumbira e bikes
Prev: Chii chinonzi simba batsira bhasikoro?
Next: 4 zvikonzero vanhu vanofarira magetsi mutyairi bhasikoro